आफैंले हटाएका झालाई त्यही पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण के हो ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 02:48:58
जापानी समय : 06:03:58
Tag: आफैंले हटाएका झालाई त्यही पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण के हो ?
आफैंले हटाएका झालाई त्यही पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण के हो ?
Posted on October 4, 2018 October 4, 2018 by Yadav Devkota
सुरुमा आफैले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हटाइएका दिगम्बर झालाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरेपछि विकास समितिले सो नियुक्तिबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले झाको नियुक्तिबारे १५ दिनभित्र जवाफ दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले भदौ २१ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै संचार मन्त्रालयले झालाई अविश्वास गर्दै कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि असार २१ गते भदौ पछिका देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ती खारेज गर्ने सरकारको निर्णयपछि झा पनि बर्खास्तीमा परेका थिए ।
त्यसपछि झाले मुद्दा फिर्ता लिएपछि संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले झालाई नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो ।
समितिले सुचना निकालेपछि त्यसमा अध्यक्ष पदका लागि झासँगै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शुशिल घिमिरे, प्राधिकरणमै कार्यरत आनन्दराज खनाल, पुरुषेत्तम खनाल, धिकरणमा सदस्य चन्द्रमणनी चौलागाइ र नेपाल टेलिकमका पुर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले पनि आवेदन दिएका भए पनि जिम्मेवारी भने झाकै पोल्टामा परेको थियो ।
Posted in राजनीतिTagged आफैंले हटाएका झालाई त्यही पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण के हो ?